Mashruuca Isku/filnaasho Gaarsiinta [MIG] Qoysaska Agoonta
Hay’adda Kafaalo waxay muddo ku mashquulsanayd mashaaric awqaaf ah iyo kuwo isku filnaasho gaarsiin kara qoysaska agoonta ah ee Khayrfalayaasha Soomaliyeed biilayeen dhawrka sano. Markii ay Kafaalo ku samaysay diraaso xeel dheer mashaaricda maalgelinada yaryar ee qaarkood loo yaqaan (Microfinance), kadibna talo gelin la samaysay waalidiinta caruurta, Masuuliyiinta Kafaalo ee jooga wadankii, Khayrfalayaasha Soomaliyeed iyo dad khibrad uleh mashruucan iyo cilmiga dhaqaalaha, waxay hay’addu qorshaysay mashruuc la magac baxay Isku-Filnaasho Gaarsiinta Qoysaska Agoonta ah, loosoo gaabiyo [MIG].
Ujeedada MIG waxay ka kooban tahay yoolal dhowdhow iyo yoolal fog-fog, oo ah waalidiinta qoysaska agoonta ah inay gaaraan isku filnaasho iyo sidii ay nolol maalmeedkooda usoo saaran kari lahaayeen, iyagoo aanan ku xirnaan duruufaha lasoo gudboonaan kara Khayrfalayaasha. Sidoo kale waxaa kujira qofka dadnimadiisa iyo barakada riz-qiga, inuu qofku dhaqdhaqaaqo. Yoolasha fogfog waxaa kamida inay umaddo barato ama jiilalka soo socda bartaan isku filnaashaha iyo wax soo saarka qofeed inuu barako badan leeyahay.
Qoys walba oo kamida qoysaska Kafaalo, iyaga ayaa talo laga waydiin xirfadda ay leeyihiin ama waxyaalaha ay kashaqaysan karaan oo ay kamid yihiin dukaan, biibito, bagaash, makhaayad, kabar, sandaqad, khudrad-iibin, harqaan-dhar, maacuun-iibin, xoolo gawricid iwm ee qofku dareemayo inuu kamiro dhalin karo. Arimahaan oo ay Kafaalo kadiyaarisay qoraalo kusaabsan jihayn, talo & tusaaleyn iyo kobcin iyo kor u qaadid qoys walba sidii ay guul ku gaari lahaayeen.
Hadaba waxaa farxad mudan inaan hoos idinkugu soo bandhigno sawiradii ugu horeeyay ee mashruucaan oo ay ka muuqato sida ay ugu faraxsan yihiin qoysaskaas iyo qof walba oo waxgarada ee dareemaya barakada ganacsiga iyo iskutashiga. Waxaa intaa kasii farxad badan kafiilada ku farxay wixii yarkaa inay waxtarkaas balaaran yeelan karaan, tanoo unoqon karta sadaqo waarta.
Mashruucan maalgelintiisa waxaa dawr wayn kaciyaaraya kafiilada Soomaliyeed, laakin waa mid u furan qof walba oo jecel inuu qoys dhan gaarsiiyo isku filnaasho, inuu kudarsado wax walba oo uu awoodo ha yaraato ama ha badnaato, waayo hadii sidaan rajeynayno Rabbi u barakeeyo qoysaskaas ganacsigooda, waxay sii masruufi karaan eheladooda iyo qaraabo badan oo la xiriirta. Qofka arinkaan ka qayb qaatana ajar weyn ayuu ku leeyahay qof walba oo laga quudiyo hawshaas iyo faa’iido walba oo laga helo inta uu mashruucaas socdo.
Waa fursad weyn oo aan ugu baaqayno qof walba oo si xeeldheer u fahansan keydka nolosha danbe (Aakhiro) iyo waliba in qofka kaluun lasiiyo maalin walba inay ka barako iyo mirodhal badan tahay in labaro siduu usoo kaluumaysan lahaa. Fadlan daawo sawirada hoose, kana qayb qaado mashruuca MIG ee halhayskiisu yahay ’Maal-geli Waligood ha Is-masruufaane’.
Tirada Martida: 21249 - Update ugu danbeeyay: 16-05-2011
Visits: 698753 | :::::